Khabiirka Cilmi-baarista ayaa sharraxaya sida loo Isticmaalo Webka
Maanta maanta baarayaasha webka waxay isku dayaan inay helaan macluumaad badan oo ku saabsan website-yada kala duwan si ay u dhameeyaan mashaariicdooda iyo soo qaad natiijooyin xiiso leh oo ka caawin kara inay kor u qaadaan ganacsigooda. Si ay sidaas u sameeyaan, waxay isticmaalaan wiishka webka ing. Waa farsamo cusub oo weyn, kaas oo ka caawiya inay ururiyaan macluumaadka boggaga internetka si toos ah. Habkan, waxay ku ururin karaan bangiyada waaweyn ee xogta muhiimka ah iyada oo aan la qaban dhammaan shaqada shaqada. Kuwa soo socda waa tilmaamo weyn oo ku saabsan sida ay u isticmaali karaan xoqitaanka webka.
Sida loo xareeyo Website-yada
Haddii aad rabto inaad xoqto faahfaahinta xiriirka ama qiimaha alaabta ama liisaska kale, waxay u baahan yihiin inay isticmaalaan barta internetka - expert advice computer. Adigoo isticmaalaya adeegga shabakadda, shaqada waxaa lagu sameeyaa oo kaliya sameynta kood (oo loo yaqaan 'scraper'). Warshadani waxay qabataa dhamaanba shaqooyinka raadiyeyaasha webka. Tusaale ahaan, wuxuu raadiyaa dhammaan macluumaadka khuseeya dadka isticmaala waxay doonayaan in ay helaan dukumintiyada kala duwan una bedelaan qaabab cayiman. Xogtaasi waxay noqon kartaa qaab muuqaal ah, qoraalo, alaabta wax soo saarka, emails, cinwaanada telefoonka, qiimaha iyo wax ka badan.
Waxyaalaha Muhiimka ah ee Lagu Ogaado
Dadka doonaya in ay jaraan boggaga internetka waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in bog kasta boggu uu ka duwan yahay waxayna leedahay shuruudaha iyo shuruudaheeda. Tusaale ahaan, boggaga internetka qaarkood waxay u muuqdaan inay bedelaan qaab-dhismeedkooda mararka qaarkood. Hagaajinta dhammaan isbeddelladan waxay u baahan yihiin dadaal badan iyo saacado badan oo shaqo ah. Raadinta webka waxay sidoo kale u baahan tahay inay taxadaraan inay raacaan xeerarka. Haddii kale, waxaa laga yaabaa inay dhibaato ka haysato. Sidii ay sidaas u samayn lahaayeen, waxay ka koobi karaan waxyaabo dhowr daqiiqado ah laga bilaabo boggag kala duwan oo ku baahsan agagaarka internetka.
Raadi dhammaan macluumaadka muhiimka ah
Webka xoqitaanku wuxuu bixiyaa qalab aad u firfircoon ganacsiyada iyo shakhsiyaadka si ay u sameeyaan baaritaano suuqa. Qalabkan khaaska ah ayaa ka caawin kara inay helaan dhammaan xogta lagama maarmaanka u ah shaqadooda, si taxadar leh u falanqee oo u hesho natiijooyinka ay raadinayaan. Natiijo ahaan, waxay ka gudbi karaan tartamayaashooda waxay ku kordhin karaan iibintooda marnaba. Iyadoo la adeegsanayo qalabka shabakada shabakada, waxay ku kaydin karaan liisaska kala duwan ee soo saarayaasha ama alaab-qeybiyeyaasha, iyo sidoo kale badeecadaha iyo in badan oo lagu keydiyo faylka.
adoo isticmaalaya kuwan wax ku ool ah Qalabka burburinta , raadiyeyaasha webka ayaa dhab ahaantii soo rogi kara xalka badan ee akhriska. Tani waxay badbaadin kartaa wakhti badan kadibna waxay akhrin karaan oo ay falanqeyn karaan raaxada kombuyuutarkooda adigoo riixaya hal badhan. Waxay badbaadineysaa saacadaha isku dayaya in ay xogtaas oo dhan gacanta ku helaan. Natiijadu, waxay ku yar yihiin ku xirnaanta xidhiidhada firfircoon ee internetka, maadaama ay akhrin karaan khayraadkooda dambe.
In la helo shaqaale suurtagal ah
Maamulayaal badan ayaa maanta isku dayaya inay helaan musharax khabiir ah si ay ugu biiraan kooxdooda ama shaqo doonka kuwaas oo isku dayaya inay dadka helaan meel gaar ah. Markaad isticmaalayso qalabkaan, waxay si fudud u heli karaan dadka ay rabaan.
Soo Saar Qiimaha Suuqa Suuqa
Haddii ay raadinayaan inay qiimeeyaan qiimaha alaabooyinka qaarkood, adoo isticmaalaya adeegga shabakada oo ay si toos ah u heli karaan. Webka xajinta ayaa ka caawin kara inay la socdaan dhammaan qiimaha ay ka doonayaan dukaamada intarneedka iyo suuqyada.